Ny fomba atokan'ny zanakao anao amin'ny fomba mahaliana GFUN
Tsy fantatrao ny fomba hampandehanana ny kilalao fanatanjahan-tena ho an'ny ankizy? Olana iray atrehin'ny mpanjifa maro izay vao avy nidona tamin'ny orinasa ity. Betsaka ny orinasan-tserasera momba ny mpanjifa izay tsy dia tsara araka izay noheveriny. Raha ny tena marina dia tsy resaka finday io.
Raha misafidy ny fomba fitantanana mety isika dia afaka mampitombo ny vola azontsika. Olana goavana amin'ny fandidiana ny fampilalaovana kilalao zaza. Tahaka ny eo amin'ny sehatry ny fandraharahana, raha tsy manana traikefa ianao dia tsy ho hitanao hoe nahoana ny fitaovana mitovy no mahazo vola amin'ny tontolo mitovy.
Io no safidin'ny fomba fandraharahana. Raha te hitantana ny fialam-boly ho an'ny fialam-boly ianao dia mila mahalala ny toerana misy anao sy ny olona manodidina anao. Rehefa misafidy ny hividy fitaovana kilalao ho an'ny ankizy dia fidio ny fitaovana mety amin'ny toerana. Miasa ho an'ny ankamaroan'ny olona eo amin'ny sehatra izany.
Aza hadino hatrany fa tsy ho an'ny ankizy ny fitaovana milalao. Ho an'ny fomba fanaovan-jaza ho an'ny ankizy, araka ny toerana sy ny fitaovana novidiana. Miankina amin'ny halavirana, ny fotoana ary ny isan'ny olona izany. Tsy azo atao ny miteny jamba hoe mahazo vola izy.
Tsy maharitra io.
Raha tena tsy hainao ny mikasa na hiasa tsara, dia hamolavola ny fomba fitantanana amin'ny antsipirihany ho an'ny tranokalanao, ny valalabemandry ary ny fitaovanao hamahana ny ahiahinao! Ny fitaovam-pilalaovan'ny ankizy dia mety hanentana ny fahalianan'ny ankizy mandritra ny fotoana maharitra. Mieritreritra foana ny ankizy amin'ny zava-drehetra, manintona azy ireo ny zava-baovao, ary ny fomba hihazonana io fisintonana io dia miankina amin'ny fitsangatsanganana.
Ohatra, ny lapa fanta-daza amin'ny ankizy, miaraka amin'ny zavatra samihafa, lehibe na kely, ny ankizy dia hanana fahatakarana hafa isaky ny milalao dia mora ny misarika azy ireo milalao imbetsaka. Ny rivo-piainana amin'ny lalao dia azo antoka. Ny olan'ny fiarovana hatrany dia efa hatramin'ny voalohany. Raha misy fiarovana amin'ny fitaovana kilalao zaza dia tsy azo ampandehanana io. Noho izany, rehefa mampiasa fampitaovana amin'ny lalana mandeha ianao dia tsy maintsy misafidy mpanamboatra mahafeno fepetra hividy sidina azo antoka.